Fahad oo ka dalbaday “Qoor Qoor & Laftagareen” in aay bedelaan xubnaha aay u soo magacaabeen Guddiga Doorashooyinka | SMC
Home WARARKA MAANTA Fahad oo ka dalbaday “Qoor Qoor & Laftagareen” in aay bedelaan xubnaha...
Fahad oo ka dalbaday “Qoor Qoor & Laftagareen” in aay bedelaan xubnaha aay u soo magacaabeen Guddiga Doorashooyinka
Ilo wareedyo ka tirsan Villa Somalia ayaa noo xaqiijiya in Madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabad-sugida Fahad Yaasiin Daahir ayaanan ku farxin xubnaha ay qaar kamid ah maamulada u soo xusheen guddiyada doorashadda.
Sidda ay caddeynayaan ilo wareedyada, Farmaajo iyo Fahad oo si gaar ah u qoonsaday wakiialada uu xushay hogaamiyaha Galmudug, Axmed Cabdi Kariye, ayaa u arkay shaqsiyaad aanan u jaranjeerin dhankooda.
Farmaajo aya ku amray in uu Qoorqoor uu bedelo liiskiisa, arrintaas uu ay u badan tahay in uu ka ogolaanayo maadaama uu kamid yahay madaxda maamuladda ee daacada u ah taliska Villa Soomaaliya.
Sidda ay muujinayaan macluumaadka, Farmaajo iyo Fahad ayaa doonaya in Qoorqoor uu gudbiyo magacyo “mar walba u hogaansama amarada Madaxtooyadda”.
Wararka ayaa intaas ku daraya in sidoo kale ay madaxda dowlada federaalka saluugeen xubnaha uu soo gudbiyey madaxweynaha Koonfur soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa in uu faafin rasmi ah kusoo saaro magacyadda guddiyadda si ay u guda galaan shaqooyinkooda.
Maadaama uusan xiriir wanaagsan kala dhaxeyn, Farmaajo iyo Fahad ayaanan fileyn in xubno taabacsan ay ka imaan doonan dhanka Puntland iyo Jubaland, marka loo eego Koonfur Galbeed, Galmudug iyo HirShabelle oo hoostaga Fahad Yasin & Villa Somalia.
Previous articleQM oo war cusub ka soo saartay shaqaalo lagu dilay Muqdisho & Qorshaha lagu dilay oo
Next articleErdogan oo ku dhawaaqay tallaabo ka dhan Charlie Hebdo